Ifoto ye-600MB "Sphere" ebonisa isibhakabhaka saseManhattan | Abadali be-Intanethi
Iiyure ezili-160 ukudala le mbono ye-megapixel engama-600 yesibhakabhaka saseManhattan
UGoogle uyasivumela nge-app yakhe yekhamera ukuba sithathe uthotho lweefoto ezijikeleza kwindawo ethile. Oko uhlobo lwemifanekiso ibizwa ngokuba yi "Sphere Photos" kwaye ziyakwazi ukuhlanganisa zibe nye wonke umbono obanzi esinokuthi sibe nawo kumphezulu. Ngokuqinisekileyo ngaxa lithile uya kube umbonile omnye egqame kwinethiwekhi yoluntu ekwabelwana ngayo ngumhlobo okanye ilungu losapho.
Ngoku ngumfoti uDan Piech othathe ixesha lakhe lokusibonisa ifoto, awayibiza ngokuba yi "New York City Dream". I-602 megapixels kwaye yenziwe kwiifoto ezili-189 abantu bendawo yaseManhattan. Lilonke, lo mfoti uye wafuna iiyure ezili-160 ukuze enze kwakhona ngendlela enika umdla umbono wesixeko saseNew York.
Eyona njongo yakhe, njengoko esitsho, yayiyiyo yenza kwakhona amandla adlamkileyo avela kwisixeko njengeNew York kwifoto efikelele kwiimegapixel ezininzi. Ngesi sizathu, iguqulwa ibe ngumfanekiso ogqibeleleyo wesinye sezona zixeko zinemifuziselo kule planethi.
Ha idinga unyaka ukuze ikwazi ukufumana isidanga sombala Kufuneka abeke umfanekiso omnye into umntu anokuyiva xa ejonga macala onke ngombono obanzi wemekobume edolophini enjalo. Umfanekiso otyebileyo kakhulu kwiinkcukacha, ngenxa yobunzima bayo obukhulu kwiimegapixels, kwaye apho i-iconic Empire State Building inokufumaneka khona.
Ibeyi kusetyenziswe iimegapixels ezingama-9,563 zizonke yedatha yefoto yokugqibela yeemegapixels ezingama-602. Lo mfanekiso ubizwa ngokuba "liphupha lesiXeko saseNew York" unokwandiswa ukuya kuthi ga kwiimitha ezisisikwere ukugcina isisombululo sayo esiphezulu. IHDR nezinye iindlela zobuchule ziye zasetyenziswa ukuze ezi foto ziprintwe ngomlinganiselo omkhulu ngokuchaneka okukhulu.
Unokufikelela kushicilelo lwe kweli qhagamshelo. Su Facebook kunye nayo Instagram. Ngokuchanekileyo kwiiveki ezine ezidlulileyo siphawule ngomnye umsebenzi omhle owenziwa ngumfoti, nangona ngenye ingqiqo malunga nesixeko saseNew York; isixeko esikhethekileyo solu hlobo lwezifundo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Iiyure ezili-160 ukudala le mbono ye-megapixel engama-600 yesibhakabhaka saseManhattan